Muwaadin ciidanka gumaysiga itoobiya Gaadhi ku Jiidhsiiyeen Qoraxay. | Ogaden News Agency (ONA)	الأخبار بالعربية
Muwaadin ciidanka gumaysiga itoobiya Gaadhi ku Jiidhsiiyeen Qoraxay.
War dag dag ah oo hada soo gaadhay wakaalada ONA ayaa sheegaya in muwaaadin u dhashay dalka ogadeenya maanta ciidamada cadawgu baabuur Uraaal ah ku mariyeen banka qoraxay oo ka tirsan gobolka qoraxay ee Ogadeenya.
Allaah ha uraxamee marxuunka ay ciidanka gumaysatada itoobiya sida xun u jiidhsiyeen baabuurka ayaa lagu magacaabaa Aar Abdi diiriye. Sida loo xaqiijiyay wariyaha wakaalada ee dalka koonfur africa marxuunka ayaa geel la joogay maanta markii ay ciidamada itoobiya gaadhiga jiidhsiiyeen.
Marxuunka ayaa lagu aasay magalada qabaridahar. Waxii warar ah ee ka soo kordha arintan iyo guud ahaan ogadeenya si aad ula socoto ONA isha ku hay.
Short URL: http://www.ogadennet.com/?p=13617
Posted by Sahan on Jul 7 2012. Filed under Warar.
The Ogaden, Ethiopia and Africa: Fifty Horrendous Years of Oppression and Under-development under AU Banner
Ciidanka Gumaystada Ethiopia oo meelo kala duwan oo Ogadeenya ka tirsan Dhibaatooyin xidhay & Dhac isugu jira kula dhaqaaqay Shacabka.
Xoghayaha Wadanka Mareykanka oo Su’alo shacabku weydin dono ka qeyb qaado
Daawo- Waryasiyo laga soo qaday Shirwaynihii 3aad ee OYSU San Diego.
Ogaysiis muhiim ah oo kusocda Jaaliyadda Holland
News in English (450)
Last 24 hours: 8,688 Last 7 days: 59,219 Last 30 days: 246,534 Online now: 32 Traffic Counter